Ozi EUR / USD - Euro na Dollar Trade amụma / News | Mụọ ahia 2
Ego agba ọsọ EURUSD gbadara n'okpuru ọkwa 1.1900, Dollar bidoro izu n'izu siri ike
EURUSD Ọnụahịa Ahịa - Eprel 12 Site na mmalite oge n'elu n'elu akara 1.1904, EURUSD alaghachila ịbịaru etiti 1.1800 n'oge ahịa ụtụtụ Mọnde. Dollar malitere izu na ihe siri ike dị ka okwu nrịanwụ Fed nyere ụfọdụ nkwado maka greenback. Nzọụkwụ Nzọụkwụ: 1.2190, 1.2050, 1.1952Support Levels: 1.1800, 1.1693, […]
Tọzdee, Eprel 8, 2021
Ego EUR / USD Na-amasị!
A na-ere EUR / USD n'akụkụ mpaghara ebe siri ike, yabụ ire ere nwere ike ịpụta n'oge na-adịghị anya. Omume ọnụahịa nwere nnukwu nsị bipụtara nke a hụrụ dị ka usoro ntụgharị. Dịka ị maraworị, USD ahụ abanyela na ndọtị ya na ndị ya na ya na-agba ahịa ka USDX lara azụ ntakịrị. N'agbanyeghị, na US Dollar Index na-ekwusi ike […]
EURUSD Upside Run Dwindles Na-esote N'etiti Mid 1.1700 Ọkwa Dị na Mgbapụta Dollar Dollar
EURUSD Ọnụahịa Ahịa - Eprel 5 Na mbido nnọkọ European, ndị otu EURUSD nyefere ntopute ya n'okpuru etiti ọkwa 1.1700. Ha abụọ gbatịrị ọdịda ya n'ịgbalị ịdaba ala 1.1700. Ndị na-achụ ego na-elekwasị anya na ngwa ngwa akụ na ụba ngwa ngwa mgbe akụkọ ọrụ US wepụtara na Fraịde gafere amụma, na-eme ka ahịa dị elu. Igodo Nzọụkwụ […]
EUR / USD Throwback, NFP Na Ihe ngosi!
EUR / USD chọtara nkwado siri ike karịa ọkwa 1.17 ma ọ bụ ugbu a ka ọ gbanwee. Na teknụzụ, ịghaghachi nwa oge nwere ike ịbụ ihe okike mgbe oke ọdịda kachasị nso. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịkpachara anya dị ka US NFP, ategwọ Ọrụ Enweghị Ọrụ, na Nweta Oge Awa Nweta nwere ike iweta nnukwu volatility ma emechaa taa EUR / USD rallies na […]
Nkwụnye ego na-abụghị ọrụ ugbo (NFP)
EURUSD Downside Pressure na-eche Nkwado Nwayọọ na 1.1870 Ọkwa
EURUSD Ọnụahịa Ahịa - March 22 N'agbanyeghị ọganihu mbụ na ngụkọta atụmatụ EURUSD, ụzọ abụọ ahụ nwere nrụgide ka ọnụahịa ahụ rutere na ọkwa dị ala na 1.1870. EUR na-ejide nke ọma, agbanyeghị ụzọ ahụ nwere ike ịdaba na ezumike n'okpuru 1.1870 ọ bụ ezie na ị na-edepụta njedebe dị ala anyị nwere ike ịhụ mgbanwe site na [
Tuzdee, Machị 16, 2021
EURUSD ka na-ejide 1.1910
Nkwado Igodo: 1.1910 Nguzogide Nzuzo: 1.1940 - 1.1970 - 1.1990 Mid Term View EURUSD na-ada maka izu 3 gara aga, ihe dịka 3.36% (410 pips), mana izu gara aga anyị hụrụ ala na ule nke ọkwa 1.1820. Ugbu a, na price bụ trading n'elu 1.1910 (nke confluences na-enwe kwa izu pivot), […]
Bọchị Sọnde, Machị 14, 2021
Dollar US na-alaghachi Oge Ọchịchị, dị ka Ọnọdụ Egwu Ahịa Slumps
Mmetụta mmetụta dị ize ndụ ahịa na nso nso a kpatara S & P 500 na ọkwa ọhụrụ dị elu, mere ka US bulie $ 120 ijeri na ire ere coupon ma kpalie European Central Bank (ECB) ikwe nkwa iji "budata" mmụba mmemme mmemme, yiri ka ọ na-agba ọkụ n'ihu izu ụka izu ụka. Ka ọ dịgodị, na US dollar index (DXY) […]
Tọzdee, Machị 11, 2021
Dika Njikọ Na-eweta Mmụba, ECB Setịpụrụ Iji Drivezụta Akụrụngwa
Hapụ iwu ego agbanweghị, ECB gosipụtara na ọ ga-abawanye ịzụrụ ihe onwunwe n'ime ọnwa ndị na-abịanụ. Mbugharị ahụ bụ nzaghachi maka mmụba nke agbụ, nke nwere ike ime ka ọnọdụ ego sie ike. N'ihe banyere mmepe akụ na ụba, ụlọ akụ etiti kwuru na ọ nwere ike ịdaba na 1Q21 na ọkwa dị elu nke ọrịa coronavirus, mmụba, na mgbochi. Otú ọ dị, […]
Central Central Bank (ECB)
Tuzdee, Machị 9, 2021
EURUSD weghachite site na ala na ọkwa 1.1835 n'etiti ịdaba na mkpụrụ nke afọ 10 US
EURUSD Ọnụahịa Ahịa - March 9 EURUSD dara na ala nke 1.1835 n'isi mmalite nke nnọkọ European na Tuesday na-akụda ọkwa kachasị ala na ọnwa. N'oge nke a post, ụzọ rebounds si ala dị ka ọnwụ nke nso okwu ala ngwa ngwa yiri ka na- ọnụahịa n'elu ufọt ufọt 1.1800 […]
Ntuli aka nke Onye isi ala na Nkwụnye ego na-abụghị nke ugbo
Nhoputa ndi ochichi nke United States nke 2020 ga-agbagha ahịa? Nkebi nke 2 Gini mere n'ezie na ahia mgbe nsonaazụ ntuli aka ndi ochichi US gara aga malitere iputa? Mpempe akwụkwọ a na-aga n'ihu n'isiokwu akpọrọ: "Nhọrọ ntuli aka nke United States nke 2020 ọ ga-agbanwe ahịa ndị ahụ?". Ekwuru m ihe ọ bụla ọhụrụ, ọ dịghị ihe na-enwetụbeghị ụdị ya ga […]
Emelitere ikpeazụ: March 11th, 2020